Bosch. Iyo yakanakisa kuchinjika kwemanovel aMichael Connelly | Zvazvino Zvinyorwa
Michael Connelly. Twitter nhoroondo.
Bosch ndiro zita renhepfenyuro yeterevhizheni inofukidza zvinyorwa zvinove zvakanyorwa neNorth America Michael Connelly. Nyeredzi dze detective kubva kuLos Angeles Police department Harry bosch uye vatove 23, chekupedzisira Moto weusiku. Su kugadzirisa kukrini diki, kubva 6 mwaka y 10 zvitsauko imwe neimwe, ndiyo yakanakisa izvo zvinogona kuoneka izvozvi, kunyangwe iwe uri muverengi kana muoni. Izvi zvangu ongorora nekuti anga ari angu akateedzana egore.
1 Bosch - Nhoroondo
2 Bosch - Iyo yakateedzana
3 Nei uchiona
Bosch - Nhoroondo
Michael Connelly Iye ndewake weboka remakuru erudzi rwemazuva ano rweNorth American Negro Mutori wenhau uye mupepeti we zviitiko Kwemakore mashoma, akashandira Los Angeles Times uye akagadzira Hieronymus "Harry" Bosch muna 1992 muna Iyo nhema maungira (iyo yakahwina mubairo weEdgar). Kubva ipapo Harry ndomumwe weanonyanya kuzivikanwa, anoteedzerwa uye anoyemurwa mavara.
Ini handina kuverenga iwo makumi maviri nematatu emanoveli, asi ini ndakaverenga mamwe uye pakati Vangu vandinoda ndizvo Guta reMapfupa y Zvidhoma zvipfumbamwe.
Harry Bosch ndiani?
Mumabhuku Harry bosch Ndicho murwi yehondo ye Vietnam, mwanakomana wa pfambi uyo akapondwa achiri mudiki uye ndiani case kwete yave iri yakagadziriswa. Akakurira mumusha wenherera uye hupenyu hwakatarwa neicho chokwadi, ruzivo rwake muhondo uye nebasa rake se mutikitivha wekuuraya kutanga uyezve kubva kuvhura kesi yeyuniti yeiyo LAPD, in the Hollywood chiteshi chemapurisa.
Bosch ndiye mupurisa Ndakaseka, zvichida rough dzimwe nguva asi kukudzwa zvizere, uye neimwe nzira yake yekutarisana nekugadzirisa nyaya dzake. Kunyatso chenjera mubasa rako, anotendeuka pane ese kesiZvishoma nezvishoma, ari kudhonza tambo dzaanowana, uye nekutsunga uye asingaregedze kana aona kuti ndidzo dzakarurama. Ndiye mumwe wevaya vari zvirinani kuva neshamwari pane kumuvenga. Uye kunyangwe achiratidzika kunge asingasimudze munwe kana mumwe munhu achida kutarisana naye, zviri nani kuti usamufuratire.
Hobbyist Jazza mwanasikana, Maddie, iyo yaanogovana kuchengetwa neyake Ex mukadzi Eleanor. Iyo zvakare ine mukoma kubva kudivi rababa, Mickey haller, iyo inoshanda se gweta mudziviriri uye ndiani nyeredzi imwe saga yemazita ezvinzvimbo.
Uye mune ese ari maviri enganonyorwa uye akateedzana, iyo hupenyu hwega Harry's uye hukama hwake nevakadzi hwakaringana uye hushoma, izvo hazvibvise iota yekufarira ngano. Kana vari hukama hwavo nevezera ravo nemaboss hwakakosha, ndiani anoziva mashandisiro aanoita (Harry anosiya iyo LAPD pane imwe nguva uye vanoiisa kanopfuura kamwe), asi vanogara vachimutsigira.
ari titles izvo zvinoumba saga ndeizvi:
Iyo kongiri blonde.
Passage kuenda kuparadhiso.
Kusviba kupfuura husiku.
Mune rimwe divi.
Rima divi rekuonekana.
Zviso zviviri zvechokwadi.
Bosch - Iyo Serie
Iyo inogadzirwa neAmazon uye pakati vaparidzi vatungamiriri vari vaviri Michael Connelly -Uyo anosayina zvitsauko zvinoverengeka semunyori- se Titus welliver, iyo inounza Bosch kuhupenyu. Uye haina kugadzirisa imwe kesi pamwaka, asi asi sanganisa mafuremu akati wandei zvakatorwa mumabhuku. Semuenzaniso, mu Mwaka 1 bvisa zvinhu kubva Iyo kongiri blonde, Guta reMapfupa y Echo paki.
Imwe neimwe inosanganisira Zvikamu gumi umo makesi akasiyana anokura zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo, isina unopinza script twists kana manomano. Kubudirira ndekwekuti anozviita ne yakanaka tempo, kuchinjanisa pakati peizvozvo basa mupurisa kutumira, all kudzingirira nekupfura, kuvandira uye kunyatsogadzirisa uyezve nekunakidzwa pakupera kwemwaka wega wega.
Imwe yemisiyano nemanoveli ndeyekuti vanopa Harry se murwi of the kutanga Gulf War, kuita kuti ive yechinyakare nanhasi. Uye zvirokwazvo for vakachena kwazvo yehunhu, Muviri waWelliver Haisi iyo zvinyorwa Harry, sezvazvinowanzoitika.
Zvisinei, kune muoni pasina mareferenzi, kana iye anotanga kusvika kwaari kuburikidza neakateedzana, iye anowana akaumbwa akakwana ake hieratism uye kusimba mukududzirwa uye mufananidzo weWelliver. Sezvakaita nevamwe vese.
Izvo zvakakosha kuratidzira mavara maviri, ngatitii pasina nyama kana pfupa:
chikuru Los Ángeles, iro rakanyanya guta remabhaisikopo munyika uye rakasarudzika uye rinotarisa kune vakawanda vanyori vakawanda (verenga James ellroy). Iine yayo yakajeka dhorobha horo, zvikomo, migwagwa uye nzvimbo, tisingatauri iyo zvinoshamisa imba kunogara Bosch, anotaridzika chiso chake chakanakisa uye chakasviba panguva imwe chete.
And the Hollywood chiteshi chemapurisa, uyo kutsamira chaiko ivo vanogamuchira kutora kweiyo nhepfenyuro uye vanopa iko kuswedera kune anonyatso kuratidzwa basa remapurisa.
Kana zviri zvekukanda pachayo, kune iyo runako shanda Titus welliver, mutambi akatambura mumafirimu mazhinji uye akateedzana (Yakarasika, Vanakomana veNyonganiso, Deadwood…). Akatokodzera izvo nyeredzi basa rekucherechedza uye kupenya yenhoroondo yake refu seyakaomarara sekondari.
Ivo vanomufukidza, nehukuru hwakafanana uye nebasa rakanaka, Jamie hector, semumwe wako mutikitivha jerry edgar; Madison lintz Chemhondoro Maddie boschkana Sarah clarke Chemhondoro Eleanor Wish.
Kutaurwa kwakasarudzika kunoitwa nevakaroora avo vanopokana uye unenge mweya weDhipatimendi: iyo matikitivha Johnson naMoore kana Bharel y Crate, sekuzivikanwa kwavanoitwa (Troy Evans naGregory Scott Cummins), avo vava kuda kuenda pamudyandigere asi vachiri kupa yakawanda yekutamba.
Uye nemaboss: iyo refutenendi Nyasha Billets (Amy aquino), uyo anogara aine pasi pake kune vakaoma uye vakuru; Y Mukuru Irvin Irving (lance reddick), iyo zvakare ine yayo chaiyo nzira dzekuchengeta kurongeka.
Nokuti kana uri mudzidzi kune murume nemukadzi uye tarisa mapurisa akateedzana kubva pakuberekwa Bosch iri mutsika yepamusoro yeakanyanya. Neimwe batai ku Rwiyo runosuruvarisa rwemugwagwa wegomo kune akanyanya kushuvira, avo kubata y invoice zvese zvinoonekwa uye solvency yevatambi, iyo zvinyorwa y nhaurirano incisive uye chaiyo (zvakanyanya kusimba mushanduro yekutanga) vari zvakaisvonaka.
Kune zvakanyanya kumhura, pamwe vanogona kurasika zvishoma kuti vatevedze nzira dzinopindirana, asi kunyangwe zvakadaro, zvinongonakidzwa ne mhando iyo distills.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Bosch. Iyo yakanakisa kugadziriswa kwemanoveli aMichael Connelly
Mabhuku akanakisa emapurisa